Dablay hubeysan oo rasaas ku furay ciidamo Iiraan oo gaada ka cayaar soo bandhigayey… – Hagaag.com
Dablay hubeysan oo rasaas ku furay ciidamo Iiraan oo gaada ka cayaar soo bandhigayey…
Posted on 22 Seteembar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Dablay hubaysan ayaa rasaas ku furay ciidammada Iiraan oo gaado ka cayaar kusoo bandhigayay magaalada Ahvaz oo ku taalla koonfur galbeed dalkaasi, waxaana ku dhintay tiro dad halka ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Dablayda ayaa weerarka kasoo qaaday barxad u dhaw goobta ay ciidammada ku sugnaayeen, waxayna qabeen dareeska militariga.
Warbaahinta waxay sheegtay in loo malaynaya in weerarka ay soo qaadeen kooxo jihaad doon ah.
Xukuumadda Iiraan ayaa u dabaaldegaysaa sannadguuradii kasoo wareegtay bilaawgii dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan sannadihii 1980-kii ilaa 1988-dii, waxaana ciidammada militariga dalkaasi ay soo bandhigayeen gaado ka cayaar lagu xusayo munaasabadda.
Sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya ciidammo dhaawac ah oo goobta laga qaadayo.
Weerarka dableyda ayaa socday muddo 10 daqiiqo ah balse laammaha ammaanka Iiraan ayaa hadda la wareegay goobta oo xaaladda dejiyay, sida ay kusoo warramayso warbaahinta xukuumadda Iiraan.
Magaalada Ahvaz ayaa kamid ah magaalooyinkii ugu dambeeyay ee dalkaasi oo ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda oo ay shacabka uga cabanayeen sicir barar iyo qiimaha badeecadaha oo sare u kacday.